Iningi lethu abathanda ukudla okwehl 'esiphundu. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi izitsha okumnandi kwakungafanele, manje noma ngokuhamba kwesikhathi bayoba ngizithola, ufuna into entsha. Futhi kusukela umbono usizo - ukudla kufanele nhlobonhlobo. Croup Sago - omunye imikhiqizo ezimbalwa, okuyinto unit ezaziwayo. It has an imvelaphi yokufakelwa kanye Yenziwe isitashi ahlukahlukene.
okusanhlamvu Yemvelo sago bomdabu eNingizimu-mpumalanga Asia, Malaysia naseNdiya. Lapha ikhula entendeni igama elifanayo, okuyindawo ibhalwe futhi lo mkhiqizo. Sago entendeni uthela izithelo kanye ekuphileni, kulokhu isiqu somzimba wakhe iqoqa inani eliphezulu nomsoco kanye nesitashi. Ngaphambi zom abendawo unqunywa, umongo iphathwa, phansi yomiswa. Ngemva kwalokho, le croup Sago ngomumo. Isetshenziselwa izifundo lokuqala nelesibili, Uphudingi, isetshenziswa njengoba ugcwalisa noma njengoba isidlo esihlukile. Lokhu "multi-ukusebenza" ngenxa yokuthi ukuthi sago okusanhlamvu ayinakho ukunambitheka abahlukene futhi iphunga, kodwa kahle ubamba iphunga nokunambitheka nezinye izitsha.
Lo mkhiqizo akhishwa ezinye izinhlobo izihlahla, kodwa kuzo zonke lezi izitshalo ezimweni zethu zezulu ayibi. Uma ukungenisa iqolo usulungile, kuzobiza ngempela eqolo, ukuze ezweni lethu ke wenziwe eliphezulu amazambane noma corn isitashi. Ubuchwepheshe kubenzima, ngoba ukubaluleka umkhiqizo futhi ngempela eliphezulu.
I ngqo amakhemikhali ukwakheka kwe-okusanhlamvu kunzima ucacise: konke kuncike ubuchwepheshe kanye impahla eluhlaza. Kodwa okusanhlamvu ncamashi sago eqhukethe kilojoule (amagremu 100 umkhiqizo iqukethe 300-350 kcal), kuyacaca ukuthi amaningi okuyinto eyabangela carbohydrate (zenziwe afika ku 85%).
Izici yenqubo ukukhiqizwa kwaholela ukungabi pheze ephelele sago amaprotheni eziyinkimbinkimbi. Lokhu sekwenze kwaba lula ukuyisebenzisa uma ukungabekezelelani ngamaprotheni wezokudla (yesifo celiac noma phenylketonuria). izitsha wenza kusukela kule wokudla, kuthiwa kugaywe ngokushesha futhi babe ikhalori okuqukethwe okusezingeni eliphezulu. Ngoba ngokuvamile Kunconywa emva izinhlungu zokugula okungathí sina, ukubuyisela isisindo futhi amandla, kanye nengane kanye nokudla ingane.
Yemvelo okusanhlamvu sago ukupheka elula, kodwa amazambane noma corn isitashi umkhiqizo kufanele uqaphele. Ukwehluleka ukubona ukulungiswa imithetho angaba nezinkinga: iphalishi ongaqhoshisa ndawonye yinhlama, noma chaza mass kiseleobraznuyu.
croup qualitative ine uhlobo ubuhlalu umbala Milky omhlophe, kungekho izigaxa noma inclusions angaphandle. Abanye abakhiqizi engeza ukubunjwa ushukela wokushiswa, bese iqolo aphuzi ansundu. Nakani iphunga sago - croup akumele iphunga sikhuntile noma lokukhunta. Ukunambitha - akwamukeleki off-flavour, intukuthelo noma acid. Umkhiqizo ngokuvamile ezilimele yayithola okusanhlamvu okuningi izinambuzane. Kulokhu, lo croup esifudumeza Saga, omisiwe, izinambuzane ahlukaniswe. Isitolo emva ukukhipha izimpahla lo mkhiqizo kungcono esitsheni uphawu (ingilazi jar ngesivalo Friend) ukugwema ukumuncwa iphunga angaphandle.